laacibfm.com » 10ka Difaac Ee Ugu Goolasha Badan, Halka Uu Kaga Jiro Sergio Ramos & Halyeeyada Aanu Gaadhi Karin
Sergio Ramos ayaa kaalinta shanaad ka galay difaacyahannada ugu goolasha badan dunida, waxaanu dhaliyey 120 gool intii uu kubadda cagta ku jiray.
Kabtanka Real Madrid ayaa saddex ka mid ah afartii sannadood ee ugu dambeeyey dhaliyey in ka badan toban, laakiin xili ciyaareedkan ayaa u ah mid wanaagsan oo uu wali sii wato rikoodhkiisa dhalinta goolasha.
Rikoodhihii uu ka dhaliyey Athletic Bilbao, waxa uu ahaa goolkiisii 12aad ee uu dhaliyey xili ciyaareedkan, waxaana uu mar kale ku muujiyey sida uu u yahay ciyaartoy la isku hallayn karo oo aan shaki la gelin karin rikoodheyaashiisa.
Horraantii xili ciyaareedkan ayay u suurtogashay Ramos inuu dhaafo rikoodhkii goolasha ee difaacii Bayern Munich iyo Germany ee Franz Beckenbauer, waxaanu sii raaciyey Roberto Carlos oo uu isaga jidka kusii maray, ka hor intii aanu gaadhin Steve Bruce. iyo Graham Alexander.
Sergio Ramos oo ay da’diisu tahay 34 jir, waxa uu xili ciyaareedyada soo aaddan soo qaban karaa Graham Alexander oo dhaliyey 130 gool, isla markaana toban gool oo kaliya ka horreeya Ramos, laakiin waxa aan isaguna kasii fogeyn Laurent Blanc oo 153 gool dhaliyey.
Difaaca reer Spain ayaanay suurtogal u noqon doonin inuu gaadho rikoodhka difaaca ugu goolasha badan abid ee Ronald Koeman oo dhaliyey 253 gool. Sidoo kale, Daniel Passarella oo 175 gool dhaliyey iyo Fernando Hierro oo 163 gool saxeexay ayaa ku fogaan doona maadaama uu dhamaadka cimrigiisa ciyaareed soo dhow yahay.
Halkan kaga bogo 10ka difaac ee ugu goolasha badan:
10. Franz Beckenbauer – 109 gool
9. Roberto Carlos – 113 gool
8. Paul Breitner – 113 gool
7. Steve Bruce – 113 gool
6. Sergio Ramos – 120 gool
5. Graham Alexander – 130 gool
4. Laurent Blanc – 153 gool
3. Fernando Hierro – 163 gool
2. Daniel Passarella – 175 goals
1. Ronald Koeman – 253 goals